Seat Agricultural, iSihlalo mveliso, Tractor Isitulo - TFS
TFS, Kumele iqela mveliso e China, kubandakanywa isihlalo & ezibandaknywayo abenzi, uvelisa umgca ebanzi lezihlalo ezifanelekileyo kuzo zonke iintlobo Motor Vehicle, kuquka Iitrektara, Ezolimo, Construction, Industrial, Ezisongwayo & Garden, Turf Professional, kunye nezixhobo eluncedo izicelo. Umgca esihlalweni iquka iintlobo ezininzi izihlalo ezithandwayo kwakunye ezinye zoyilo isihlalo mihla ukubukeka ezizodwa kunye neempawu
Iqela strong technical wasebenza iminyaka engama-20 yembali yemveliso isihlalo, ukwenza uyilo esihlalweni lwamva nje ngexesha elifanayo gqolo sandise le amandla emveliso. Namhlanje iiseti ezintathu umgca wemveliso ngenxa ugwebu, ingakumbi kubonakala ekuqhekezeni technology ngalo ilaphu exonxiweyo backed IVinyl olusetyenziswa nezihlalo yeklasi eliphezulu. Umgca lemveliso lukwabandakanya processing ngokupheleleyo ezihlalweni, ezifana, machining, bexhentsa, kwakunye ukuwelda, ukupeyinta, ibandla. Ngaphandle ekhankanywe apha ngasentla, tooling senziwe sodwa, equlethe ngumngundo sokunyathela, iplastiki & amagwebu enkulu.
Imveliso kumazwe angaphandle eUnited States, Japan kunye namanye amazwe, ngelo umsebenzi ngexesha elifanayo ezinkulu neenkampani zasekhaya izixhobo noomatshini lwezolimo.
izihlalo zethu ezisetyenziswa kwezolimo, ukwakha, amashishini, nengca & umyezo, latest evumelana uyilo ukuya nice ngenkangeleko, ukhululekile, ukhuseleko kunye withstanding everyday kakubi kunye neemeko ezinzima zendalo.
efektri yethu aqinisekisiwe imigangatho ISO9001, nesatifikethi CE, ukuqinisekisa izihlalo zethu ukugcina umgangatho engqinelanayo efunwa uGEMS.
Nokuhlolwa elebhu ukwazi ukuhlangabezana uvavanyo nezihlalo, kuquka amandla, ukukrazula, ukutshiza ityuwa, UV, LINGATSHA, lingonakali, durometer zokuvavanya, njl
Ukuba ukhangela ezithembekileyo kunye nomgangatho umthengisi, okanye nomdla ekufundeni elinye lala kwiimveliso zethu, nceda qhagamshelana iqela lethu ukuhlangabezana neemfuno zakho.
10 Oct 2019 New CNC alawulwa umshini wokugaya ukuba sukube engena workshop.CNC wethu kuye kwaphucuka kakhulu ukukwazi yophuhliso lwemveliso nesantya yophuhliso, ukunceda uphuhliso lwamashishini 02 Nov 2019 T ...
VIP Passenger Seat , yangasemva Seat , Universal Seat Slide Rail , Anti-zelanga Gun ejolise Seat , Ukusonga Seat , Hardware Torsion Metal Wire yamasango ,